Niantsona teny amin'ny 400km ambonin'ny tany, ka nipetraka tao amin'ny station spatiale internationale ISS ireo astronaute 4 mianadahy, frantsay Thomas Pesquet, Japonais Akihiko Hoshide ary Amerikanina roa Shane Kimbrough sy Megan McArthur nandritra ny 6 volana. Niala ny ISS omaly alatsinainy 08 novambra 2021 izy ireo, ary tafaverina ety an-tany vao maraina androany talata 09 novambra 2021, raha niodidina ny Station ISS aloha izy ireo, nandritra ny 1ora sy sasany, naka sary ny station ahitana ny mety fisian'ny fahasimbana vokatr'ireny météorite na vato manidina midona aminy ireny. Izay vao nizotra nihazo ny tany amin'ny hafainganam-pandeha 27 000km/ora.naharitra 7min teo ny fidirana ny atmosphère izay miteraka hafanana hatrany amin'ny 1800°C, izay ilana ny fiarovana ilay Capsule misy azy 4 mianadahy ireto, satria dia tapaka koa eo ny fifandraisana rehetra. Afaka izay, dia nisokatra ny elon'aina lehibe 4, nampidina azy ireo ny fari-dranomasin'i Golfe du Mexique manamorona an'i Floride, Amerika, ka dia nisy sambo sy angidimby nitsena azy ireo.
lundi, 08 novembre 2021 13:00
Ady tany : Nanorenan'ny Sinoa trano lehibe ny tany mbola iadivana ao amin'ny Route du Fiherenana Toliara
Ny taona 1964 dia nilain'i fanjakana anamboaran-dalana ny tany "Besirasira Anketraka", eo Anketraka, Distrikan'ny Toliara 1, Faritra Atsimo andrefana, Faritany Toliara, mirefy 2ha mahery eo, ka dia niroso tamin'ny fanonerana ny vidin-tany ny fanjakana. Voaray ny vola ary dia nivoaka tamin'ny gazetim-panjakana ny 25 janoary 1964 ny fanapahana. Lasa "Route de Fiherenana 6ème partie" ny tany. Ampahan'ny tany ihany anefa no nanamboaran-dalana ary nomen'ny fanjakana ny Kaominina Toliara ny ambin'ny tany tsy nampiasaina nanaovan-dalana, ka dia nisy fianakaviana 11 hafa nangataka tamin'ny sampandraharanan'ny fananan-tany satria an'ny fanjakana ireo tany tsy nanorenany ireo. Samy nanorina sy nanajary ny tany ny fianakaviana tsirairay araka ny fanomezan-dalana nataon'ny Kaominina ambonivotry Toliara.
dimanche, 07 novembre 2021 19:45
Fisokafan’ny sisin-tany : Niisa 640 ireo mpandeha avy ao Eoropa tonga androany
Niisa 640 ireo mpandeha avy ao Eoropa tamin'izao sidina voalohany an'ny Air Madagascar sy Air France nanamarika ny fisokafan'ny sisintany indray taorian'ny covid. 400 tamin'izy ireo dia nandeha tamin'ny sidina Air France tonga androany Alahady vao mangiran-dratsy tetsy Ivato, ary mpandeha 240 kosa tamin'ny sidin'ny Air Madagascar. Niazo avy hatrany ny hotely fandraisam-bahiny izy ireo ary tsy hahazo hivoaka na handray vahiny raha tsy mivaly ny "Contre test PCR" izay natao azy ireo. Hentitra ny fanaraha-maso amin'izany. Ho an'ny volana novambra : Hisy sidina roa isan-kerin'andro ny Air Madagascar : - Sidina miainga Antananarivo - Paris ==> Alatsinainy sy Zoma - Sidina miainga PARIS - Antananarivo ==> Alarobia sy Sabotsy.
Tonga ao Sambava ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana IMBIKI Herilaza ka natomboka tamin'ny fihaonana tamin'ireo tompon'andraikitra ambony notarihan'ny Ben'ny Tanàna ao Sambava, izay sady Filohan'ny Fikambanan'ny Ben'ny Tanàna miisa 86 ao amin'ny faritra SAVA, niaraka tamin'ny Sekretera Jeneraly ao amin'ny Faritra SAVA, ary ireo Lehiben'ny fitaleavana isan-tsokajiny. Notohizana tamin'ny fitsidihana ny Centre Sainte Famille izay mitaiza no mampianatra zaza kamboty sy sahirana miisa 700 mahery. Notohizana tamin'ny fitsidihana ny fanamboarana ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany. Narahina atrik'asa tao amin'ny Biraon'ny Kaominina. Ny fandalovana ny Avenue de l'émergence izay vita soamantsara noho ny ezaka goavana ataon'ny Ben'ny tanàna. Nifarana tamin'ny fijerena ny fonja. (Jereo Sary Tohiny)
Notsaraina tao amin’ny Fitsarana ady heloka bevava Anosy ny Alarobia teo ny raharaha fakana an-keriny an’i Anil Karim, tompon’ny Sophasu izay orinasa mpamatsy fanafody, nitranga ny aprily 2020. Karana roalahy, dia i Moustafa Radjan sy Dilavarhoussen Razanamamode no voatondro ho atidohan’ity fakana an-keriny ity. Nohelohin’ny Fitsarana hanao asa an-terivozona mandritra ny 20 taona avy izy ireo. Samy mbola miriaria any izy roalahy ireo, ary tsy nisy nipoitra tamin’io fitsarana io. Namoahan’ny Fitsarana didy fampisamborana izy ireo noho izany. Sivy ny voampanga tamin’ity raharaha fakana an-keriny ity no niatrika ny Fitsarana Anosy tamin’io fotoana io, ka vehivavy ny telo. Efa voatana am-ponja tao Tsiafahy nandritra ny roapolo volana izao ireo teratany Malagasy voasaringotra amin’ity raharaha ity, fa ireo Karana voatondro ho atidohan’ity fakana an-keriny ity nanao sambo nilentika, mbola miriaria any. Voatonona amina raharaha maloto maro i Moustafa Radjan, indrindra ny fakana an-keriny na « kidnapping ». Manamafy izany ity didy navoakan’ny Fitsarana momba ny ady heloka be vava, ny alarobia lasa teo ity.
Manamarika zavatra hafahafa ny mpanjifa ao Moramanga Faritra Alaotra Mangoro. Tato ho ato dia maro ny hena amidin’ny mpivaro-kena ambony latabatra tsy misy marika na fitomboka manome antoka ny mpanjifa fa nandalo fitsarana ara-pasalamana. Manana toerana famonoana biby fakana hena hohanin’ny olombelona ny Kaominina ambonivohitr’i Moramanga, mahagaga anefa hoy ny mpanjifa indraindray dia hena kisoa misy voavary no amidin’ny mpivaro-kena ambony latabatra. Tandindomin-doza ny fahasalamam-bahoaka manoloana izany, nefa toa tsy misy te ho tompon'andraikitra, na ireo mpiaro ny zon’ny mpanjifa aza tsy ahenoan-teny, ka anaovan’ny mpanjifa fanairana ny manampahefana isan’ambaratonga. (Jereo Sary Tohiny)
Nanomboka tamin'ny 21 oktobra 2021 no nahatsikaritra ny tsy fahitana azy ireo tao Morafeno ny fianakaviany. Ny harivan’io dia tonga nampandre ny zandary ao amin’ny Poste Fixe Antsalaka. Ny apitson’io dia roso ny fikarohana, hay nalevin'ireo tsy matahotody tamina lavaka efa ho 30 metatra izy mivady.Efa andalam-pahasimbana ny razana. Tamin’ny fizahana nataon’ny dokotera no nahitana fa nisy ratra, izany hoe novonoina aloha, avy eo nodorana, dia nototofana fotaka taorian’izay. Ny alika nompian'izy mivady nihaodihaody tsy nety niala teo amin'ny manodidina ilay lavaka no nahalalana fa tao no nandevenana azy ireo. Very ny akoho aman-jatony sy vary akotry tamin'ny bidon maromaro an'izy mivady ireto.
Tsy diso anjara amin'ny fankalazana ny faha 60 taona ny Polisim-pirenena ny Fitaleavam-paritry ny Filaminam-bahoaka aty amin'ny Faritra Androy. Izany dia nomarihina tamin'ny alalan'ny Fanatanjahantena, Hetsika ara-koltoraly maro, fanomezana Rà ireo mpiara-belona. Tonga nanome voninahitra izany lanonam-pankalazana izany ny Solombavam-bahoaka Jean Michel Henri, voafidy teto Ambovombe Androy sady Kestiora Voalohany ao amin'ny Antenimieram-pirenena, sy ireo manam-pahefana isan-tsokajiny eto Androy. Nanolotra ranom-boankazo ho an'ireo Polisy eto Androy amin'izao fankalazana izao sy vola 1 tapitrisa Ariary ny depioté Jean Michel Henri. Nankahery hatrany ireo Polisy eto Androy i Atoa Kestiora Voalohany, amin'ny hahatontosana antsakany sy andavany ny adidy izay ankinin'ny Vahoaka amin'izy ireo. (Jereo Sary Tohiny)
Mamaraparana ny Fananganana ireo "Vigie de Police" miisa EFATRA (04) ireto ny eo anivon'ny Faritra Amoron'i Mania, izay tarihan'i Governora ramatoa Mamiarisoa Radaloson, amin'izao fotoana izao. Izany no natao hisian'ny fitoniana sy fandriam-pahalemana eo anivon'ny Faritra, fa indrindra koa mba ho fiarovana ny Ain'ny Vahoaka sy ny Fanànany. Efatra no nanombohana ny asa fananganana eto antampo-tanàn'Ambositra : Fokontany Morafeno, Fokontany Vatovory, Fokontany Antanamahalana ary Fokontany Ambalamahasoa, izay isan'ireo Fokontany sokajiana ho mafanafana izy ireo. Nanambara moa ramatoa Governora fa atolotrin'ny Faritra amoron'i Mania ampitiavana hoan'ny Polisimpirenena ireto fotodrafitrasa natao ireto. (Jereo Sary Tohiny)
Nanolotra fitaovana informatika ho fanampiana amin’ny ady atao amin’ny Herisetra mifototra amin’ny maha-lahy na maha-vavy (Violences basées sur le genre – VBG) ny « Fonds des Nations Unies pour la Population » (UNFPA), ny Talata 02 Novambra 2021. Izany dia notanterahina teny amin’ny Foiben’ny Firenena Mikambana eny Andraharo, ho an’ireo Ministera miisa efatra miara-misalahy amin’ny ady amin’ny VBG, dia ny Ministeran’ny Fitsarana, ny Ministeran’ny Mponina sy ny Fiahiana ara-tsosialy ary ny Fampiroboroboana ny Vehivavy, ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka ary ny Ministeran’ny Filaminam-bahoaka.